ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးလည်းပြီးရော ချက်ချင်း ခေါင်မိုးရန်ပုံငွေရှာဖို့ ဆုတောင်းတဲ့အချိန်စတာ ဆိုတော့ သူ့ခမျာ အရှေ့ဆုံးတန်းကနေ ချက်ချင်းထပြန်ရင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ ဆက်ထိုင်ပြီးဆုတောင်းနေတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အုတ်ကြွတ်ပြားတစ်ချပ် ပြုတ်ကျလာပြီး သူ့ခေါင်းပေါ်တဲ့တဲ့ ကိုမှ ကျလာတယ်။ အုတ်ကြွတ်က သိပ်မကြီးတော့ အကြီးအကျယ်အနာတရတော့ မဖြစ်ဘူးပေါ့။ ဘုရားသခင်ကသူ့ကို စကားပြောဒါပဲလို့ စိတ်ထဲမှာ သိရှိခံစားလိုက်တယ်… အဲဒါကြောင့် ချက်ချင်း ခပ်ကျယ်ကျယ် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်း ဆုတောင်းလိုက်တာကတော့ “….. ဘုရားကျောင်းခေါင်မိုးပြင်ဖို့ အလှူငွေ ပေါင် ၁၀၀၀ ထဲ့ လှူပါ့မယ်…” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အဲ….. နောက်ဆုံးတန်းကနေလည်း ဆုတောင်းသံလေးတစ်ခု မပွင့်တစ်ပွင့် ကြားလိုက်ကြရပါတယ်….
“…ဘုရားသခင် နောက်တစ်ချပ် ချလိုက်ပါအုန်း…….” ဟူသတတ်။ ဘုရားရှင် ချလို့ အုတ်ကြွတ် ပြုတ်ကျတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဘဲဆိုဆို အုတ်ကြွတ်လေးနဲ့ တွေ့သွားမှ ဘုရားသခင်ရဲ့ နိုင်ငံတော်အတွက် ပါဝင်သင့်မှန်း နားလည်သဘောပေါက်သွားတဲ့ အဲဒီအသင်းသား လိုမဖြစ်ကြစို့နဲ့ရယ်လို့ စာဖတ်သူအားလုံးကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ဘုရားပေးတဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ ငွေကြေး၊ စွမ်းအားတွေကို ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပြန်လည် ဆက်ကပ်နိုင်ကြပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုပါတယ်။
This entry was posted on June 1, 2011 by thawngno in Articles Christian Life, Thawngno and tagged Thawngno.	Shortlink